बाढी र डुवानपीडित जनताको पत्र
जय नेपाल जय सलाम
यहाँहरुलाई त सबै ठीकै होला भन्ने आशा छ र ईश्वरसँग यसैको कामना गर्दछु । रह्यो हाम्रो कुरा, त हाम्रो हालत अत्यन्त खराव छ ।
बाढी र डुवानले हाम्रो घर—परिवार र गाउँ टोल समाजका सामु निकै ठूलो समस्या उत्पन्न गरेको छ । अघिल्लो साताको प्रारम्भका केही दिन(शुक्रवारदेखि सोमवारसम्म)मधेशका, खास गरी पूर्वी र मध्य मधेशका, जिल्लाहरुमा मुसलाधार पानी पर्यो ।
पहाडमा पनि निकै वर्षा भएको थियो । कति पानी पर्यो त्यसको कुनै आँकलन गर्न सकिँदैन । पहाडमा परेको पानी पनि सबै मधेशमै एकत्रित हुनपुग्यो तर त्यो पानीले निकास पाउन सकेन । पानी जति सबै मधेशकै भूमीमा चक्कर काटिर्हयो ।
प्रकृतिको सिद्धान्तका हिसावले हेर्ने हो भने यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने यसको निकै प्रतिकूल असर पर्यो मधेशको भूमीमा ।
सबैलाई स्पष्ट नै छ यहाँको भूमी समथर छ । सबैतिर सरपट फैलिएको छ । खोलाहरुको पुरानो सतहमाथि उकासिएको छ । वालुवाले भरिएको छ । अर्थात् खोलाहरुको गहिराईमा निकै कमी आएको छ । तर यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।
सरकारले यस्ता सतह उकासिएका खोलाको गहिराई कायम गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएको पाइएन । यसै गरी पानीको उचित निकासतर्फ पनि ध्यान दिइएको पाइएन । फलतः खोलाका पानी चारैतर्फ फैलिने अनुकूल वातावरणको सिर्जना हुन पुग्यो ।
खोलाको गहिराई कम हुँदा खोलाको पानी अन्यत्र मोडिनु स्वाभाविक थियो । यसपटक मधेशमा यस्तै भयो र यसै कारण पहाडबाट बाढीका रुपमा आएको पानीको कहरले मधेशमा डुवानको आकार ग्रहण गर्यो र प्रलयकारी विपद्को रुप धारण गर्यो तर सरकारले समय छँदै सावधानीको कुनै उपाय अपनाउन सकेन । महधेशको हाल वेहाल छ ।
जनजीवन अस्तव्यस्त छ । घरहरु उजाडिएका छन् । कैयौंको विचल्ली परेको छ । तर राहत र उद्धारमा जुनप्रकारको तदारुकता अपनाइनु पथर््यो त्यो देख्ज सकिएन ।
हामीलाई दुख लागेको छ । हाम्रो आशा र सहाराको आधार सरकार नै हो तर हामी उदासमात्र होइन निकै उदास भयौं । सरकारको लापर्वाहीको शिकार हामी सोझासिधा नागरिक भयौ ।
हामीले सरकारले मागेको कर तिरेकै थियौ तर हामीले तिरेको करवापत सुरक्षा पाउन सकेनौ ।
सरकारमा सहभागी सहयोगी दलका नेताज्यूहरु,
के हाम्रो नियति यही नै हो ? हामीलाई गर्व छ, हामी मधेशी हौं । तर यदाकदा, जब बाढी र डुवानजस्तो त्रासदीको पीडा भोग्न बाध्य हुनुपर्छ, लाग्छ किन मधेशी भयौं ? के मधेशमा राजनीति गर्ने, विशेष गरी सरकारमा सहभागी नेताले यस प्रश्नको उत्तर दिन सक्छन् ?
आमजनताको आरोप छ, सरकारमा सहभागी दल र तिनका नेता राजधानी काठमाडौमा मोज मारिरहेका छन् । ठूलो घरमा आलिशान जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् । तर हामीजस्ता निमुखा जसको मधेशको कुनै गाउँहरुमा फुसको एक सानो घर छ र बाढीको कहरमा परी त्यो घर कि त वगेको छ कि त डुवानमा परी जलको गर्भमा विलीन भएको छ,
सोच्नुस हामीमाथि के वितिरहेको होला ? त्यस कहरमा परी हाम्रा वालवच्चाको विचल्ली हुँदा कस्तो हुँदो हो ? कसैलाई अनुभूति छ ? यसको उत्तर सहज छैन ।
वस, केही नेता र मन्त्रीले हामी सामान्य जनताले तिरेको कर व्यय गरी हेलिकप्टर चढेर बाढी र डुवानग्रस्त क्षेत्रको आकाश—भ्रमण गरेको हामीले सुनेका र देखेका छौं । बरु हेलिकप्टर चढेवापतको रकम हाम्रालागि राहतमा खर्च गरेको भए केही उपलब्धी पाउन सकिन्थ्यो ।
हे महान नेतागण,
तपाईहरुलाई मधेशबारे केही थाहा छैन भनेर कसरी भन्ने ? हो यसपटक सरकार केही बढी उदार भएको देखिएको छ, शायद आसन्न निर्वाचन भएर पनि होला । हामीलाई आशंका छ, त्यो अस्वाभाविक हो ।
यसपटक सरकारले प्रत्येक मृतक परिवारलाई दुई लाख रुपैया दिने घोषणा गरेको छ । यसै गरी नेपाली कांग्रेससम्बद्ध सांसदहरुले आफ्नो एक महिनाको भत्तादिने घोषणा गरेका छन् ।
सिद्धान्ततः यो राम्रो कुरा हो । तर प्रश्न उठ्छ, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन् कसरी हुन्छ ? यसको कार्यान्वयन् कति तदारुकतापूर्वक हुन्छ ? विचारणीय छ ।
सरकारका गृहमन्त्रीका अनुसार मधेशका जिल्लाहरुमा आएको बाढी र उत्पन्न डुवानका कारण हालसम्म एक सय २३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यस्तै एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार मधेशमा करिव दुई अर्व रुपैयाँ बरावरको कृषि बाली सखाप भएको छ ।
यसै गरी मधेशको ८० प्रतिशत खेतियोग्य जमिन बाढी र डुवानको चपेटामा परेको छ । स्पष्ट छ, यी सबै तथ्यको उपस्थितिमा हुने हानीको सहज आँकलन सम्भव छैन । यस परिदृश्यमा यहाँको सामाजिक आर्थिक जीवनमा कस्तो नकारात्मक प्रभाव परेको छ, त्यसको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । तर हाम्रा नेतागणले अहिलेसम्म के हेरेर बसे ? अहिलेको अवस्थामा महत्वपूर्ण प्रश्न हो यो ।
सरकारमा सहभागी नेतामात्र होइन सरकारमा सहभागी नभएका नेताहरुलाई पनि हो यो प्रश्न । विशेष गरी मधेशको भूमीमा राजनीति गर्ने मधेशी नेतालाई खास प्रश्न हो यो । मधेशका कुनै पनि गाउँमा मधेशी नेताको अर्थपूर्ण उपस्थ्तिि अनुभव गरिएको छैन । के हामी मधेशका नेताको हैसियत दलको कार्यकर्ता र मतदाताको मात्र हो ?
तिनका तुलनामा बरु निजी क्षेत्रको सक्रियता महत्वपूर्ण छ । तिनले सक्दो प्रयास गरिहेका छन् । यस अवस्थामा मधेश भूमीलाई संकटग्रस्त घोषित गरी राहत, उद्धार, उपचार, पुनर्निर्माण, पुनसर््थापन र विकासको एकीकृत कार्यक्रम युद्धस्तरमा सञ्चालन गरिनु जरुरी छ । आशा छ सरोकारवालाको ध्यान यसतर्फ आकृष्ट हुनेछ ।
आदरणीय सरकार र नेताज्यूहरु,
प्रश्न उठ्छ, हामीले के गर्ने ? हामीसँग केही उपाय छैन । पानीको गति निर्वाध हुन्छ । यसको गतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यसको गतिलाई रोक्ने प्रयास गरियो भने यसले प्रायः अनिष्ट निम्त्याउँछ ।
तर यसको हेक्का राखिँदैन । नेपालको वर्तमान यथार्थलाई दृष्टिगत गरियो भने देश तीनतिरबाट बाँधले बाँधिएको पाउन सकिन्छ । यसको प्रभाव नेपालको भूगोलमा पर्ने निश्चित छ । सत्य के हो भने, पानीको वहावलाई थुनछेक गरेर रोक्न सकिँदैन ।
मानवनिर्मित संरचनाले पानी संकलन, यसको प्रवाहित हुने मार्ग व्यवस्थापन, निश्चित ठाउँमा वेग नियन्त्रण आदी गर्न सकिन्छ । पानी नियन्त्रण गर्न ठूला नदीमा ठूला बाँध र व्यारेजको निर्माण गर्ने कुरा नौलो होइन । नेपालमा पनि गण्डक, कोशी, महाकाली आदी नदीमा यस्ता बाँध र व्यारेज निर्माण गरिएका छन् ।
पानीको वहावले प्रायःजसो व्यारेज वा बाँधलाई कुनै क्षति पुग्दैन । बाढी अनियन्त्रित भएका वेला व्यारेजका ढोका खोलेर पानीलाई निकास दिने प्रचलित विधिहो ।
तर यो विधिले मात्र पानीको वहाव नियन्त्रण हुन सक्दैन । मूल कुरा हो पानीको स्वाभाविक वहावलाई रोक्ने प्रयास गर्दा उत्पन्न हुने समस्या । नेपालका नदीहरुको वहाव—विश्लेषण गर्ने हो भने पानीको निकासको उचित प्रवन्ध नगरिएको पाइन्छ र यसबाट नेपालको तल्लो तटीय अर्थात् मधेशको भूमीले वर्षेनि समस्या भोग्न बाध्य हुनुपरिरहेको छ ।
यस समस्याबारेमा समय र्छदै सोचिएन भने भष्यिमा थप विकराल समस्या वेहोर्न नेपालले बाध्य हुनुपर्नेछ ।
आदरणीय नीतिनिर्माताहरु यससम्बन्धमा दीर्घकालीन नीति तय गरिनु जरुरी छ । पहाडबाट बगेर आउने, मूलतः चुरेबाट निःसृत हुने खहरे खोलाहरुले पानीसँगै बालुवा, माटो र ढुंगा बगाएर लिएर आउँछन् र मधेशको समथर भूमीमा छोड्दछन् ।
यसबाट मधेश भूमीमा यस्ता खोलाको सतहमा वृद्धि हुनुका साथै पानीको उचित निकास उपलब्ध नभएका कारण पानीले मधेशमा दुख दिने गरेको छ ।
अहिले नेपालमा एकथरि तर्क प्रस्तुत् गर्ने गरिन्छ, छिमेकीभारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध र सडक बनाएका कारण उचित निकास वाधित भएकाले नेपाली भूमी डुवानमा पर्ने गरेको छ । तर यसलाई मात्र कारण मानेर ढुक्क पर्न सकिँदैन ।
नेपाल—भारत भएर बग्ने नदीको जल वहावको व्यवस्थापन, नेपालको मधेश क्षेत्रका नदीमा थुप्रेको गेग्रान र पानीको उचित निकासको व्यवस्थाजस्ता विषय नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताका लागि अत्यन्तै सरोकारका विषय हुन् । यस विषयमा आफ्नोतर्फबाट कुनै प्रयास नै नगरी अर्कालाई जिम्मेबारी पन्छाएर आफूले उन्मुक्ति पाउन सकिँदैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले समयमै उचित ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।
यसतर्फ आवश्यक ध्यान नपुर्याए आगामी दिनमा झन विकराल समस्या उत्पन्नहुने निश्चित छ । अहिलेलाई बाढी र डुवानग्रस्त क्षेत्रका वासिन्दाका लागिउचित राहत र उद्धारको व्यवस्थापनमा सरोकारवाला निकाय जुट्नु जरुरी छ ।
वाढी र डुवानपीडित मधेशी जनत